Mazano Anobva Semalt: Nzira Yokuziva Nayo Kushandurwa Kwemapurisa
Phishing is an attempt by scammers to try to dupe users ignorant. Vanoshandura mharidzo dzavo kuti vafanane nevaya vanobva kumakambani anokodzera uye zvino vanyengedza vanhu kuti vape mashoko avo, uye saka vanozvishandise kuti vadziwe kusaziva. Mamwe emashoko akafanirwa seakafanana nesita reBT, kana password. Zvakakosha kucherechedza kuti BT haibvunzi ruzivo rwomunhu oga kana kuti kunyange mabhengi asina chikonzero. Uyezve, BT emails haina kumbobatanidzwa.
Julia Vashneva, iyo Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vekubudirira, anokurudzira vese vashandisi veIndaneti kuti varambe vakatarisa zviratidzo zvakadai sokuratidza kuti vangangodaro - t3 clearomizer resistance.
Nzira Yokushandisa Nayo Purogiramu yeIndaneti
Emails anotsigira kushandiswa kwevashandi, kana kukumbira ruzivo rwemunhu oga ari kushungurudza, uye vashandi vanofanira kuvadzivisa. Vanotora mafirimu anotevera:
maeamisi asina kutarisirwa anopawo zvakanaka kuti ave echokwadi anopa
An email link iyo inodzorera kune webhusaiti, iyo inobvunza mumwe kuti ave nechokwadi chekodha.
Vanyengeri vanoita rondedzero inosanganisira kukurumidzira kukwezva vanhu.
Gara uchishandisa URL dzakanyorwa uye kwete avo vakaiswa mumishumo ye email.
Ongorora kururamisa kwegirama nemifananidzo yakashandiswa mu email.
Matanho Okutora Pamusoro Pekugamuchira Ipiyo yePishing
Chiito chinotorwa chinoenderana nemashandisi akazarura email. Dhipatimendi iyi yakashanda nekutarisana ne-phishing emails kuBT kushandisa phishing@bt.com kana munhu achida kupinda navo.
Kana munhu asina kubhadharira kana kupindura kune hutano hwakapiwa, asi akazarura email, hapana chikonzero chekutya..Pane mukana wekuti hapana kukanganisa kwakaitika, mumwe anofanirwa kuisa mamiririri e-mail uye kuitumira kune dhipatimendi rekunyengedza kuBT, uye kubvisa.
Kana mumwe akanyora pachibvumirano, kana akadzikinura chibatanidzi chakabatanidzwa, asi asina kuzadza chinhu mufomu, munhu anofanira kutarisa chetachiona ndokubva ataura email.
Kana mumwe akagovera zvido zvake, chinhu chekutanga chekuita ndechokuongorora kombiyuta nokuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Zvadaro, chengetedza zvakare nhoroondo yeBT sezvo zvichigona kuva nemukana wekukanganisa. Iko kune mazano ekutarisana neakakanganiswa nenyaya, uye emaimeri. Kune rumwe rutivi rwevatengi, kushandura mapepa epasiwedi uye nyanzvi dzinokurudzira kushandisa imwe yakasiyana pane imwe nhoroondo. Mabhangi anoda zviziviso kuti afungidze chero basa risina kujairika kana munhu atovapa mabhizimisi ezvebhengi. Pakupedzisira, idzai email kune dhipatimendi rekunyengedza.
Ndiani anogamuchira phishing emails?
Kune vasikana vanosvika mamiriyoni 37,3 vanowana ma phishing emafiles emafree kubva ku2012 uye 2013. Tsananguro inonyanya kuitika ndeyokuti kune nzira dzakasiyana siyana dzinoshandiswa nekutengesa kuwana mayemeri emafaira kuti ashandise pakuita kwavo phishing endeavors. Vanoshandisa autom autom, botswando, webhusaiti yewebhu webhusaiti yepamusoro, kutenga mazita kubva kune vamwe vanokanganisa, vachizvifananidza kuva mawebsite anobvumira phishing emails. Kugamuchira email yakadaro hazviiti kuti munhu asarudze pangozi, ndicho chiito chakatorwa mushure mezvo icho chinovaisa pangozi.
Kuchengetedza Kurwisa Basa Rokunyengera
Kambani inopa BT Protect, iyo inobatsira kudzivirira kusvibiswa kwemarware pane zvese zvinosangana neIndaneti.
Kubudisa BT NetProtect Plus inowedzera kubatsiro sezvo inopa vashandi vayo vane zviziviso pamusungo unogona kuitika sezvo BT inotumira zvose zvepishing emails kubva kune vamwe vashandisi kuTetProtect Plus team.
Chengetedza firamiti ye spam kuti iwedzere kutyisidzira.
Iva nechokwadi chekuvandudza mapurogiramu ewebsite.
Usambopindure kune email inonyunyuta.
BT Zvigadziro Kuita Kuti Vatengi Vadzivirire
Kambani yakapa hutano kune vashandisi vanogona kutumira email yose inoshungurudza, iyo inobva yatora pakarepo. Inobatsira nekuongorora nzvimbo dzose dzewebhu dzinofungidzirwa kuti dzinobatanidzwa mukuita basa rekuita zvepenzi uye dzinovatora pasi kana dzikabatwa muchiito.